နားကိုရောဂါကူးစက်ခြင်းနှင့်နားကိုက်ခြင်းများအတွက်အိမ်သုံးဆေးဝါးများ တစ်ယောက်တည်း - ကျန်းမာရေး | ဇွန်လ 2022
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး သတင်း ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ဖျော်ဖြေရေး ရပ်ရွာ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ရပ်ရွာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီသတင်း ဆီးဂိမ်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ပြင်းထန်သောအားကစား
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> နားကိုရောဂါကူးစက်ဘို့ 13 အိမ်မှာကုစား
သငျသညျအစဉျအမွဲနားကိုရောဂါကူးစက်ဖူးလျှင်, သင်သူတို့ဘယ်လောက်မသက်မသာသိကြ။ နားသည်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်နာကျင်သော်လည်းသင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသိလျှင်ကုသရန်လွယ်ကူသည်။ နားကိုရောဂါကူးစက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းကုထုံးများနှင့်နားကိုရောဂါကူးစက်စေသည့်ဆေးအချို့ကိုကြည့်ကြပါစို့။
ဘက်တီးရီးယားများသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်များသည်အများအားဖြင့်နားကိုရောဂါကူးစက်စေပါသည်။ အအေးမိခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကြောင့်နားရောဂါများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ နားအတွင်းရှိပြွန်များသည်အရည်များနှင့်ချွဲများနှင့်ပြည့်နှက်သောအခါ၎င်းသည်ရောဂါကူးစက်စေသည်။
အရွယ်ရောက်သူများထက်ကလေးများသည်နားကြားရောဂါကူးစက်ခံရပြီးအများစုမှာရှိလိမ့်မည် အနည်းဆုံး သူတို့အသက်3နှစ်မတိုင်မီတ ဦး တည်းနားကိုရောဂါကူးစက်။ အရွယ်ရောက်သူများထက်ကလေးများအလယ်အလယ်နားတွင်ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာယူတိုစတီယမ်ပြွန်တိုများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Gua sha မျက်နှာ
ပူနွေးသောနှင့်အအေးနှစ်ဖက်လုံးသည်နားကိုရောဂါကူးစက်ခြင်းမှသက်သာစေနိုင်သည်။ ပူပြင်းသောအအေး (သို့) အအေးခံဆေးကိုနားရွက်ပေါ် ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်ထားပါသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များအတွက်လွယ်ကူသောနားရောဂါကူးစက်မှုကိုကုသရန်အတွက်အပူနှင့်အအေးကိုအသုံးပြုပါ။
သင်၏လည်ပင်းကိုညာဘက်သို့လှည့်ပါ၊ ၅ မှ ၁၀ စက္ကန့်လောက်စောင့်ပါ။
မင်းရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုတက်ပြီးမင်းနဲ့အတူမင်းနဲ့အတူနေဖို့ကြိုးစားနေတာနဲ့တူတယ်။ ၅ မှ ၁၀ စက္ကန့်လောက်စောင့်ပါ။
mullein စက်ရုံ၏ပန်းပွင့်မှထုတ်လုပ်သောဆီရှိသည် ပြသခဲ့သည် နားရောဂါကူးစက်မှုများအတွက်ထိရောက်သောနာကျင်မှုသက်သာရာ။ Mullein ကိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်အများစုတွင်သီးခြားစီပြုလုပ်ထားသည့်အကျိတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နားရွက်အပင်များပေါက်စေသည့်အရာတစ်ခုအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။
4. ဗီတာမင် D
Vitamin D (ဗီတာမင် D ကူပွန်များ၊ ဗီတာမင် D အသေးစိတ်)နားရောဂါပိုးကူးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိဟုထင်ရသော်လည်းခုခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်ဟုလူသိများသည်။ ပိုမိုကျန်းမာသောကိုယ်ခံအားစနစ်သည်နားရောဂါများကိုကူးစက်နိုင်ခြေနည်းသည်။ တစ် ဦး က 2017 လေ့လာချက် ထုတ်ဝေခဲ့သည် Acta Paediatrica အစာစားခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်တို့မှတဆင့်ဗီတာမင်ဒီဓာတ်၏သွေးရည်ကြည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်နားရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေး၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီ နားပေါက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည့်ဗက်တီးရီးယားများသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုသေစေနိုင်ရန်အတွက်နားကြပ်ကိုနားပေါက်တစ်လျှောက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြိတ်ထားသောကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်လေးများကိုပူနွေးသောသံလွင်ဆီဖြင့်စုပ်ယူနိုင်ပါသည်။
6. Chiropractic စောင့်ရှောက်မှု
Chiropractic ညှိနှိုင်းမှုကနားကိုပတ်ပတ်လည်တင်းကျပ်တဲ့ကြွက်သားတွေကိုသက်သာစေတယ်၊ ​​အဲ့ဒါကပိတ်မိနေသောအရည်ကိုစီးဆင်းစေတယ်။ အတွက်ထုတ်ဝေတစ်ခုမှာလေ့လာမှု စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဇီဝကမ္မကုထုံး၏ဂျာနယ် chiropractic စောင့်ရှောက်မှုငယ်ရွယ်ကလေးများအတွက်နားရောဂါကူးစက်မှုလက္ခဏာတွေလျော့ကျစေခြင်းငှါတွေ့ရှိခဲ့
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် နားကိုသန့်ရှင်းအောင် ထား၍ ဖုန်နှင့်အခြားဘက်တီးရီးယားများကိုအလယ်နားသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်အထူးသင့်တော်သည် ရေကူးရဲ့နားရွက် ။ နားတူးမြောင်းထဲသို့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်အလွန်သေးငယ်သောပမာဏကိုစိမ်ထားပါ။ သို့သော်အလွန်များပြားသောနားရွက်သို့မရောက်စေရန်သတိပြုပါ။
9. Naturopathic နားရွက်ပေါက်
Naturopathic နားပေါက်များတွင်နားရောဂါကူးစက်မှုကိုကုသရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဆေးပင်များသို့မဟုတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ လက်ဖက်ပင်များဆီ၊ mullein သို့မဟုတ်အခြားအပင်များရှိနိုင်သည်။ သဘာဝနားရွက်ပေါက်များကိုရှာရန်အကောင်းဆုံးနေရာမှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာဆိုင်သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်သည့်ဆိုင်၌ဖြစ်သည်။
သင်ဘေးတိုက်အိပ်နေသူဖြစ်ပါကခေါင်းအုံးပေါ်သို့မဟုတ်ဘဲသင်၏နားရွက်ကိုအထက်ဘက်သို့စိုက်ကြည့်ပါ။ သင်၏ဘေးဒဏ်သင့်နားကိုခေါင်းအုံးပေါ်တွင်အိပ်ခြင်းသည်သင်၏နားကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ဤအရာကိုအလိုအလျောက်မစဉ်းစားသောကလေးများအားအကြံပြုခြင်းသည်ညအချိန်တွင်သူတို့၏နာကျင်မှုကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
Apple က cider ရှလကာရည် နားကရောဂါကူးစက်မှုကိုကုသရာမှာအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်။ တူညီသောအစိတ်အပိုင်းများကိုနွေးသောရေနှင့်ပန်းသီး cider ရှလကာရည်ရောစပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းအိမ်တွင်းဆေးကုထုံးကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ထို့နောက်နားရွက်ထဲသို့ dropper ပုလင်းနှင့်အနည်းငယ်ဖြန်းပါ။ တနည်းအားဖြင့်သင်ကပူနွေးသောရေ - ရှာလကာရည်ဖြင့်ဝါဂွမ်းဘောလုံးကိုစုပ်ယူနိုင်သည်၊ နားအပြင်ဘက်တွင် တင်၍ နစ်မြုပ်စေနိုင်သည်။
အပ်စိုက်ကုထုံးသည်နားကိုက်ခြင်းနှင့်နားရောဂါများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်ဟု DAOM မှလိုင်စင်ရအပ်စိုက်ကုထုံးပညာရှင်ကပြောကြားသည်။ Aquarius အပ်စိုက်ကုထုံး နယူယောက်မှာ။ အပ်စိုက်ကုထုံးသည်ကြွက်သားများထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သွေးနှင့် Lymph စီးဆင်းမှုကိုရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသတ်သတ်မှတ်မှတ်အတွင်းသိပ္ပံနည်းကျအချက်များ အသုံးပြု၍ ရောဂါကူးစက်မှုကိုလျှော့ချရာတွင်လည်းကူညီနိုင်သည်။ ရောဂါကူးစက်မှုကိုရှင်း
13. Gua sha မျက်နှာ
Sajdak သည်ကြွက်သားများကိုအနားယူရန်နှင့်စောင်ရေတိုးတက်စေရန်ကျောက်စိမ်းသို့မဟုတ်နှင်းဆီလင်းကျောက်များကို အသုံးပြု၍ အနှိပ်ခံသည့် Facial gua sha ကိုလည်းအကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်မေးရိုးနှင့်လည်ပင်းကြွက်သားများလွှတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း Sajdak ကပြောကြားသည်။ များသောအားဖြင့်လည်ပင်းနှင့်မေးရိုးဖြင့်တင်းကျပ်သောကြွက်သားများသည်သွေးနှင့် limph သွေးယိုစီးမှုကြောင့်ကုသမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။
Nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါး (NSAIDs)
နားရောဂါများကြောင့်ဖြစ်သောနာကျင်မှုနှင့်ဖျားနာခြင်းကိုသက်သာစေရန် NSAIDs များကကူညီနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအသုံးများသော NSAIDs သုံးခု:
သက်ဆိုင်သော: Tylenol ဟာ NSAID လား။ | Ibuprofen ကူပွန် | Aspirin ကူပွန် | Naproxen ကူပွန်
၎င်းသည်ဗက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားပါကပibိဇီဝဆေးများသည်ရောဂါကူးစက်မှုကိုရှင်းလင်းစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးသည်နားရောဂါကူးစက်ရန်အတွက်ပantibိဇီဝဆေးများကိုသတ်မှတ်ထားပါကပantibိဇီဝဆေးများကိုလုံးလုံးသောက်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသောပantibိဇီဝဆေးများကိုမပြီးဆုံးခြင်းသည်ဘက်တီးရီးယားအချို့ကိုရှင်သန်စေပြီး ဦး ဆောင်စေနိုင်သည် ပိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှု ။ ဤရွေ့ကားနားရောဂါကူးစက်မှုများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးပantibိဇီဝဆေးအချို့:
RELATED: Amoxicillin ကူပွန် | Clarithromycin ကူပွန် | Zithromax ကူပွန်
Decongestants နားရွက်အလယ်သို့ ဦး တည်သောလမ်းကြောင်းများကိုဖွင့်ရန်နှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်ကူညီပေးသောချွဲအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ နားရောဂါကူးစက်မှုအတွက် decongestants ဥပမာအချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
RELATED - Afrin နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားကူပွန် | Sudafed ကူပွန်
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်ဆေးမသောက်ရသည့်ဆေးပမာဏသည်နားကိုရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုမကူညီနိုင်ပါ။ မည်သည့်အချိန်တွင်ဆရာ ၀ န်နှင့်တွေ့မည်ကိုသိခြင်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုကူညီနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏နားကိုက်ခြင်းသည်ပြင်းထန်လျှင် (သို့) အဖျား (သို့) အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားလက္ခဏာများဖြင့်လိုက်ပါလာလျှင်၊ မင်းဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်တယ် ။ သင့်ကိုနား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း (ENT) ဆရာဝန်ဆီပို့ပေးလိမ့်မည်။
အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်နာတာရှည်နားကြပ်ရောဂါရှိသူများသည်ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ နားကိုရောဂါကူးစက်မှုမှကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ဆရာဝန်များသည်နားကပ်ထဲသို့ပြွန်ငယ်များထည့်နိုင်သည်။ ပြွန်များကလေကိုအလယ်နားသို့စီးဆင်းစေပြီးရေထုတ်လွှတ်သည်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါပျောက်ကင်းစေသော FDA မှအတည်ပြုထားသောဆေးသစ် Ubrelvy နှင့်တွေ့ဆုံပါ